Duubista ilmahayga ee dugsiga | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Qaado Action si caawi Qaxootiga
Countdown ayaa bilowday Barnaamijka DVS, 50,000 Fiisooyinka diyaar noqon doonaa for2020.
The top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga: adeegga cuntada
Sidee si aad u barayay kaaliyaha shaqo - shaqo wanaagsan bixinta loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga
Waa maxay fasalka Center Refugee Online iyo sababta ay lacag la'aan ah waa?
Waa maxay qiyamka Maraykanka of America?
Waa maxay xumeynta ilmaha?
wada iyo qaxootiga iskaa wax u qabso - si ay qaxootiga la qorsheeyo kartaa nolosha cusub ee Maraykanka.
FindHello bilaabay app dabaal
Get your GED® shahaadada
About GED ah® imtixaanka
University iyo tacliinta sare
Baro talooyin resume
Warqad u qor cover a
Si aad u bilowdo ilmahaaga dugsiga ee Maraykanka, waa in aad qortid ilmahaaga dugsiga. Taas macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay in ay soo booqdaan dugsiga iyo saxiixa waraaqaha ee dugsiga ilmahaaga si aad u bilowdo.
kaa caawin doona in maamulaha kiiskaaga carruurtaada qorto dugsiga. Waa inaad saxiixdaa waraaqaha iyo siiyaan macluumaad ku saabsan dugsiga ilmahaaga. Arrintani waxay ka duwan u dhexeeya degmooyinka dugsiyada.
Waa maxay dugsiga in ilmahaygu tegi doonaa?
sannadka uu ilmahaagu waxa uu ku dhashay iyo meesha aad ku nooshahay go'aamin doona dugsiga in carruurtaada tegi doonaa.
Waa maxay waraaqaha ayaan u baahan tahay in carruurta aan diiwaan dugsiga?
waraaqaha muhiimka ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Cadaynta degenaanshaha degmada dugsiga. Taas macnaheedu waxa weeye, in aad leedahay si ay u muujiyaan in aad ku nooshahay gurigaaga ama guri. Tusaalooyinka caddeyn ku saabsan deegaanka waa goobta ah oo kirada guri, ama xisaab bangi, ama goobaha horyaalka qaansheegta. Tani waa si ay u muujiyaan in aad ka tagto xaafadda halkaas oo ardayda dugsiga waxaa duubay.
Caddeyn da'da. Tusaale ahaan, shahaadada dhalashada ama baasaboorka la fasaxa canugaaga dhalashadiisa.
Tallaalada ama diiwaanada caafimaad ee kale.
Waxay u baahan yihiin waxaa laga yaabaa in kulanka dugsiga degmada maamulayaasha dugsiga in ardayda dhigta buuxa.
Degmo walba ayaa laga yaabaa in ay qaab u gaar ah marka aad qorto ilmahaaga dugsiga. Fiiri foomka on aagga goobta dugsiga. Waxa kale oo aad tegi kartaa dugsiga oo codsaday in xoghayaha dugsiga hadlo.
Markii aan diiwaan ardayda aan?
Dugsiyada badankoodu waxay bilaabaan in Mareykanka dhamaadka xagaaga ama horraanta dayrta, in August ama September. Haddii aad ku timid Mareykanka xagaaga, waxaad booqan kartaa dugsiga ilmahaaga in July ama August si aad u ogaato sida loo diiwaangeliyo. Haddii aad ku timid Mareykanka inta lagu jiro sannad dugsiyeedka, waa in aad iska diiwaan gelin ilmahaaga sida ugu dhakhsaha badan.
Waa maxay meelaynta dugsiga?
Jago ka dhigan tahay loo ogaado heerka fasalka ardayga oo la baranayay.
Arday badan oo qaxooti laga yaabaa in uu seegay dugsiga halka xerada ama dalkooda ka soo cararaan. Waxaa laga yaabaa in ka celceliska isku da'da American heerarka fasalada arday kala duwan. Ardayda qaar waxaa laga yaabaa heer sare ah, laakiin waxay aadan ku hadlin Ingiriis ka dib. Ardaydani waxay la kulmi karaan dhibaatooyin xataa casharo dheeraad ah oo ku adag tahay in ay si fiican u bartaan Ingiriisi. Mararka qaarkood dugsiyada saaray ardayda oo dalka Mareykanka ah ee saf khalad.
Sidee ardayda horumarinta doonaa schools?
Ardayda samayn kartaa imtixaanada qaar ka mid ah ka hor bilowga sannad dugsiyeedka ama bilowga sannad dugsiyeedka. Waxaa laga yaabaa in baaritaan ku qoran. Waxaa laga yaabaa da'da sare imtixaanka inuu wax akhriyo su'aalaha si ardayga. Waa kala duwan ee dugsiga degmo kasta.
Haddii aad u malaynayso in ilmahaaga lagu meeleeyo oo isku xigta khaldan, waxaad la hadli kartaa macalinka ama maamulaha ama kooxda in baaro ilmahaaga oo wuxuu dhigay. Sharax sababta aad u aaminsan boos qaldan. Weydii, “Maxaad u malaynaysaa?” Dugsiga ayaa kaa caawin kara inaad fahamto go'aankooda. Waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad beddesho haddii ay ku heshiiyaan in ay sababaha aad.
Sidee baad u ogaado cutubka dugsiga qaaday heerka ardayga?
Dugsiyada Dhexe iyo kuwa sare waxaa ka mid ah fasalada baray heerar kala duwan ee fasalka la mid ah. Qaar ka mid ah ugu adag iyo qaar ka mid sahlan. Mararka qaarkood koorsooyin lagu qeexo magacyada heer dhib. Erayada kala duwan yihiin sida ay dugsiga degmada.
Magacyada saf ah si sahlan ama isticmaalka heerarka af Ingiriisi fudud:
xirfadaha aasaasiga ah
Magacyada cutub ee heerka fasalka Model:
Magacyada fasalka heerka ugu sareeya ama sare:
GTE (waxbarashada ardayda fahmada badan)
Advanced Mode (AP)
Dugsigu wuxuu gelin karaa ardayda heerar kala duwan. Waxaa jira sababo badan oo dooran heer dugsi.
Kuwanu waa sababaha caadiga ah:
Ama inta uu la egyahay fahamka ardayda ee waxyaabaha ay ka ogaadaan
The talooyinka waalidka / Guardian
dhibcaha imtixaanka Heerarka, sida ku haboon
Wixii la doonayay oo ay u dhamaystiraan hawlaha adag
xiisaha Ardayga ama dhiirogelin
jeediyo macalinka ama la taliyaha
Daydo shaqada ardayda
Waa in carruurta aan iskuulka?
Diiwaangelinta ardayda Maraykanka u dhaxeysay loo baahan yahay 6 Oo 16 Year. Gobolada qaar, da'doodu kala duwan tahay waxaa laga yaabaa in hal ama laba sano. Sidoo kale, ardayga si joogto ah waa mid aad muhiim u ah ardayda aad. Socodka Imaanshaha dugsiga. qayb sharciga Waxaad ka heli kartaa haddii ardayda aad lumiso badan oo maalmo dugsi. Waxaad ka heli doontaa digniin badan haddii ardayga uu bilaabay in ay lumiso badan oo maalmood. Tirada dhabta ah ee qaybaha kala duwan ee kala duwan ee waxbarashada.
Maqnaanshaha waa marka aad ka maqan counter dugsiga. Dugsiyada badankoodu waxay leeyihiin laba nooc oo ah maqnaansho. Laba nooc oo maqan Algiapan xun iyo cudurdaar la'aan.
1) Waxaa ka mid noqon kara maqnaansho fasax:
Hakinta, ficil edbin ardayga muujinaya dhaqanka aan la aqbali karin
xaaladaha cimilada halista ah halkaas oo aad ka heli karin dugsiga si nabad ah
la'aanta ah ee aaladahooda wax lagu qaado waa la taageeray (Tusaale ahaan, haddii baska ma tusin)
Geeri ku timid qoyska degdeg ah
Fasax laga Agaasimaha
Booqashada campus kulliyad
Work, haddii ay qayb ka mid ah barnaamij waxbarasho oo iskaashi waa la aqoonsan
Ka qayb qaadashada shaqo waqti-gaaban ama waqti-buuxa ah
Game kooxda isboortiga dugsiga ama tartanka
Club ama hawl gaar ah maalgaliyo by dugsiga
2) Waxaa ka mid noqon kara maqnaansho cudurdaar la'aan ah:
dugsiga laga badiyay iyada oo sheegaysa dugsiga ka hor
Skip (Ha tegin) Si aad u keensato
In dambe ee dugsiga. Dib u dhac waxaa kaloo loo yaqaan dib u dhac. Dib u dhaca soo cududaar karo iyo cudurdaar la'aan. Fasax u dhac uu leeyahay liiska isku maqnaanshaha cudurdaar.
Ardayda had iyo jeer dhali masuuliyadda loo qoondeeyey in shuqulka oo dhan seegay by. Adiga ama waalidka ama mas'uulka ah, ayaa mas'uul ka ah u sheegaya sababta dugsiga ka maqan. U sheeg dugsiga adigoo la xiriiraya xafiiska ama xafiiska xaadirinta, ama by teeb iyo heshiis is on macalinka ama xoghayaha ama maamulaha. Haddii aad ogtahay in ilmahaagu dugsiga ka maqnaan doona hore, waxaa fiican inaad u sheegto dugsiga by. Mararka qaarkood, maqnaanshaha aan la filayn ah. Tani ma aha arrin. La xiriir dugsiga subaxdii ama maalinta ku xigta.
Maxaa carruurta dugsiga uga baahan yihiin?
Ardaydu waa in ay si caadi ah u soo qaadaan sahayda, ama qalabka, dugsiga iyaga la. Your website noqon doonaa bandowgu ama dugsiga Web ama macallinka fasalka on liiska site. Waxay noqon kartaa menu kala duwan ee fasalada kala duwan.
Sida caadiga ah loo baahan yahay qoraal warqad, qalin ama qalimaan buugga. component The gal ka mid ah saddexda siddo ama fayl in sidoo kale badbaadiyo waraaqaha waxtar leh.
Waxaad ka heli kartaa qalabka dugsiga qaali. The warqad, qalin iyo qalimaan shaqo fudud. Uma baahnid in aad si ay u iibsadaan dheeraad ah oo caan ah ama raaxo. Mararka qaar, macalimiinta ama dugsiyada ayaa sahay dheeraad ah oo la siin karaa haddii aad u baahan tahay. Dugsiyada ama ururada bulshada ama qalabka dugsiga oo marmar la siiyaa diinta. Search for alaabta dugsiga ka caawisaa dhowr todobaad ka hor bilowga dugsiga. Inta badan hadiyado isla markiiba wuxuu noqon doonaa ka hor bilowga sannad dugsiyeedka.
Sidee carruurta ah iga dugsiga doono?
Badanaa dugsiga degmooyinku bixiyaan gaadiidka si aad u hesho dugsiga. Haddii aad ku nooshahay meel u dhow dugsiga, dugsiga filaysaa in aad ku socon karo ama baaskiil. Waxa ay noqon doontaa website macluumaadka waxbarasho ee gobolka basaska iyo gaadiidka. Waxay kuu sheegi doona meesha baska iyo sug in muddo ah markii ay baska waxay noqon doontaa saldhigga. La xiriir Biskrter ku saabsan macluumaadka gaadiidka dugsiga.
goobaha waxbarasho ee gaadiidka waxaa loo arkaa sharaf u ah ardayga, ma xaq ardayga. Taaso iska laga qaadi karaa haddii ardaydu ku aadan si sax ah u dhaqmaan. baska dugsiga wuxuu u baahan yahay dabeecad la mid ah dugsiga.
Waa maxay tallaalada?
Tallaalada waxaa inta badan loo baahan yahay tallaalka carruurta ee dalka Mareykanka si ay u tagaan dugsiga. Shuruudahaas waxaa ka duwan dugsiga degmada. Waxaa mararka qaarkood maamulaa sharciyada gobolka. Ilmahaagu u baahan yahay si aad u hesho tallaalada oo dhan looga baahan yahay ama u baahan yahay kacafin ka mid ah sababta aan u haysta. diiwaanka tallaalka waxaa sida caadiga ah looga baahan yahay inay iska diiwaan arday ama bilowga daraasadda.
Maxaa kids wax bay cuni dugsiga?
dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka bixiyaan cunto qado bilaash ah ama lacag la'aan ah caruurta ku nool maalin dugsiyeed kasta. Tani waa barnaamij la maalgelisay dawladda federaalka loo yaqaan Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka. Waxaa go'aaminaya inta lacag ee aad ka heli qoyska haddii ardayga u qalma qado bilaash ah ama qado qiimaha yar yahay ama ma. degmooyinka dugsiyada qaar ka mid ah macluumaadka Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka diro guriga. Weydii xoghayaha dugsiga wixii macluumaad dheeraad ah.
Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan quraacda oo qayb ka ah barnaamijkan. Dugsiyada qaarkood waxay kadambeeya ardayda dakhliga yar in ay qaataan isbuucaan ama dugsi fasax ama qoysaskooda fasaxa xagaaga. Xoghayaha School hadli kartaa in aad la ku saabsan qado lacag la'aan ah iyo dhimis. Or, xoghayaha dugsiga ayaa kaa caawin doona si aad u hesho qof ku caawin kara.
khayraadka More xarunta qaxootiga ee internetka
dugsiga dawlada ee America
Waa maxay tallaalka carruurta?
About Center Qaxootiga Online
The Refugee Center Online (RCO) isticmaalaa technology si ay u caawiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta dhisno nolol cusub ee Maraykanka.
Careers ee RCO ah
2420 NE Sandy Boulevard, Suite 102 Portland, AMA 97232
La wadaag RCO la Friend a